Miaradalana, miara todilavitra, ho an’ny ankizivavy sy ny tontolony - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Miaradalana, miara todilavitra, ho an’ny ankizivavy sy ny tontolony
Niresaka tamin’ny mpanao gazety ireo tompon’andraikitra avy amin’ny Fanilon’i Madagasikara notarihan’i Eugénie Raseliarilalanirina, Filoha Iombonana Fanilon’i Madagasikara tao amin’ny Cnpc Antanimena ny alarobia 25 aogositra, niresaka manodidina ny zaikabe sy ny fivoriam-be izay hokarakarain’izy ireo.
Hanatanteraka ny Zaikabe faha 9 sy Fivoriambe ny Fanilon’i Madagasikara, Sokoto zazavavy Katolika ny alakamisy 3 septambra 2021 hatramin’ny alatsinainy 6 septambra 2021 ho avy izao eny amin’ny Ftmtk Ambohipo Antananarivo. Ny lanonam-panokafana dia hatao ny alatsinainy 30 aogositra amin’ny 10 ora maraina ao amin’ny Ekar Md Piera Ambohipo, Sorona Masina tarihan’i Mgr Pascal Andriantsoavina sy ireo Pretra Ray am-Panahy manerana ny Nosy. Fikambanana Masina, miaina ny fototra Skotisma, mitaiza sy manabe ankizivavy sy tovovavy ho vehivavy ilain’ny tenany, ilain’ny fiangonana fa indrindra ho rantsana ilain’ny Firenena. « Miaradalana, miara todilavitra, ho an’ny ankizivavy sy ny tontolony » no lohavehitra iompanan’ny Zaikabe sy entina hiatrika ny efa-taona manaraka.
« Manao topi-maso ny amin’ny fijoroan’ny fikambanana nandritra ny efa-taona lasa, Mamakafaka ny toerana misy ny Fanilon’i Madagasikara sy ny zavatra ilain’ny Firenena, ny Tanora ary ny Fiangonana -Mamoaka fehin-kevitra sy antso avo momba ny fanabeazana sy ny Tanindrazana. Mamaritra sori-dalana hiasana sy hitondrana ny fikambanana mandritra ny efataona ho avy : arapanabeazana, ara-pitantanana, ara-pamokarana, mitondra fanavaozana amin’ny rafitra hifanaraka amin’ny vanimpotoana tsy hiala amin’ny fitaovam-panabeazana skoto sy ny finoana Katolika » no anto-pisian’ny Zaikabe, ireo sampana mena zokiny, 18 taona no mihoatra na ny sampana « Afo » ; ny Mpiandraikitra na Cheftaine sy ny Filoha isan’ambaratongany no mandray anjara amin’izany Zaikabe izany avokoa…
Ka ny amin’ity taona ity manokana, mahatra 550 mirahavavy ny mpikambana ao amin’ny Fanilon’i Madagasikara hiatrika ny Zaikabe faha 9.
Ny Filoha Iombonana kosa no miantso ny fivoriambe. Iray volana mialoha no andefasana ny fiantsoana sy ny lahadinika. Mihaino sy mankato ny tatitra avy amin’ny Foibe sy ny Diosezy rehetra ny fivoriambe. Mamaritra ny sori-dalana iombonana ho an’ny taona izy, na ara-panabeazana, na ara-pitantanana, na ara-pamokarana na ara-bola.
Manova ny fenitra raha ilaina izany. Izany no tanjon’ny Fivoriambe.
Raha ny amin’ny Fivoriam-be izay ho tanterahina eny amin’ny Ftmtk Ambohipo ity, dia mahatratra 223 mirahavavy ireo sokoto zazavavy katolika amin’ity indray mitoraka ity.
Fanaon’ny fikambanana ny zaikabe sy fivoriam-be tahaka izao ataon’ny Fanilon’i Madagasikara izao, hanaovana tombana ny zava-bita sy hamisavisana ireo tokony hatao amin’ny ho avy. Indrindra ny fikambanana manabe tanora tahaka ny fanilo izay mila maharaka ny fivoarana mba tsy ho very manoloana ireo tanora beazina.